Uyikhipha kanjani iphinikhodi ku-Windows 10?: I-Windows Hello Pin | Iforamu yeselula
Ungasusa kanjani iphinikhodi ku-Windows 10
UJose Albert | 23/06/2022 15:55 | Izinhlelo zokusebenza, Windows
Uma kuziwa ekuvikeleni amakhompyutha ethu omuntu siqu noma omsebenzi, ngokuqinisekile abaningi bethu bayakhetha vumela ukusetshenziswa okuvamile kwamaphasiwedi ukuqala i Ngena ngemvume. Kodwa-ke, uma sikhuluma ngamadivaysi eselula, sivame ukusebenzisa i indlela yokusebenzisa i-PIN ukuqala iseshini noma ukuwavula, ngoba, mhlawumbe, kukhululekile futhi kulula kunendlela yangaphambilini. Okungenzeka ukuthi kungani abaningi bevumela ukusetshenziswa kwama-PIN kumakhompyutha abo. Nokho, namuhla sizohlola njengo "susa i-PIN ku-Windows 10» Uma kunesidingo.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuqaphela ukuthi i- ukusetshenziswa kwe-PIN ku Windows 10, inikezwa ngethuluzi elibizwa IWindows Windows. Futhi, ngakho-ke, sizobona nokuthi leli thuluzi limayelana nani.
Windows 10 ayiboni iselula: Yini okufanele uyenze ukuxazulula le nkinga?
Futhi, ngaphambi kokuqala isihloko sanamuhla, mayelana I-Windows Windows nokuthi ungayiphatha kanjani, ikakhulukazi ukuthi kanjani «susa i-PIN ku-Windows 10». Sincoma ezinye zethu okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene ngokusho Isistimu yokusebenza:
Okufanele ukwenze uma Windows 10 ingayiboni iselula
Windows 10 Isikrini Esimhlophe: Uyilungisa Kanjani Le nkinga Ecasulayo
1 Isifundo sobuchwepheshe: Susa iphinikhodi ku-Windows 10
1.1 Iyini iWindows Hello?
1.2 Ithini i-PIN yokufinyelela?
1.3 Phatha iphinikhodi ku-Windows 10
1.3.1 Nika amandla ukusetshenziswa kwephinikhodi ye-Windows Hello
1.3.2 Shintsha i-PIN yakho ye-Windows Hello
1.3.3 Susa i-PIN ye-Windows Hello
Isifundo sobuchwepheshe: Susa iphinikhodi ku-Windows 10
Iyini iWindows Hello?
Ngaphambi kokwazi nokufunda «susa i-PIN ku-Windows 10» ethuluzini elibizwa IWindows Windows, kuyadingeka ukuthi silazi kafushane ukuze sizibeke esimweni esihle sendlela yokuphatha ngendlela efanele.
Noma kunjalo IWindows Windows singasho ukuthi kuwumsebenzi, inketho noma ithuluzi lesoftware kufakwe ku Uhlelo Lokusebenza lweWindows 10, okuvumela abasebenzisi bekhompyutha, i qala iseshini yomsebenzisi kuwo wonke amadivayisi akho, izinhlelo zokusebenza, amasevisi aku-inthanethi, namanethiwekhi. Futhi, konke lokhu, usebenzisa eyakhe ubuso, iris, izigxivizo zeminwe noma ukusetshenziswa okwaziwayo Indlela ye-PIN.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuqaphela ukuthi, ngaphandle kwendlela ye-PIN, Windows Hello lapho usebenza ngedatha ye-biometric, ithatha idatha kunzwa ye-iris yekhamera engaphambili noma isifundi sezigxivizo zeminwe, ukuze idale isethulo sedatha, noma igrafu, futhi ibhale ngemfihlo ngaphambi kwalokho. zigcinwe ocingweni. Futhi ethembisa lokho uthe idatha ayisoze yashiya idivayisi eshiwo ngokuphepha komsebenzisi.
Futhi ekugcineni, kuhle ukwenza kucace ukuthi ukufinyelela kuyo ngaphakathi Windows 10, kumele siye ku Iwindi lezilungiselelo zeWindows, bese ucindezela inkinobho Isigaba sama-akhawunti. Okulandelayo, sidinga ukukhetha ifayela Inketho yokungena ukuze ukwazi ukusebenzisa zonke izici zayo. Njengoba kubonakala ezithombeni ezilandelayo:
Ithini i-PIN yokufinyelela?
Nakuba, ngokuqinisekile, abaningi bayacaca ukuthi iyi-a Iphinikhodi yokungena, kubalulekile ukusho lokho ngoba Windows 10, lokhu kubhekisela ku-a ngena inombolo kamazisi yomuntu siqu (i-PIN) ngokusebenzisa Microsoft Windows Sawubona.
Ngakho-ke, kubhekwa njenge-a ikhodi yokungena kufanele kube njalo imfihlo futhi kulula ukuyikhumbula. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuhloswe ukuba kube izinombolo ezine kuphela, kodwa ngaphandle kwenkinga, ingalungiswa ngaphansi kwe-a inhlanganisela yezinombolo, izinhlamvu nezinhlamvu ezikhethekile, enamadijithi amaningi. Futhi izinzuzo zokuyisebenzisa ziyi kalula kanye nesivinini sokusebenzisa, kanye nokusetshenziswa kwayo okukhethekile kudivayisi eyodwa kuphela.
Phatha iphinikhodi ku-Windows 10
Uma i-Windows Hello isifinyelelwe ngaphakathi Windows 10, manje sesingakwazi ukuphatha izinketho ezitholakalayo, njengokuthi, Windows Hello ubuso ukuqashelwa kwe-biometric ebusweni; I-Windows Hello Fingerprint ukuhlonza izigxivizo zeminwe ze-biometric; noma eyodwa Ukhiye wokuphepha ngokuqalisa nokuqinisekisa ngezindlela zangaphandle, ezinjengokhiye wokuqinisekisa ubunikazi nge-USB/NFC.
Qaphela ukuthi, ku-Windows, a ukhiye wokuphepha ibhekisela kudivayisi ephathekayo engasetshenziswa esikhundleni segama lomsebenzisi nephasiwedi ukuze kusayinwe ukungena. Futhi lokhu kungaba eyodwa Ukhiye we-USB lokho kugcina uchungechunge lokhiye, noma a Idivayisi ye-NFC efana ne-smartphone noma ikhadi lokufinyelela. Okuhle ngale ndlela ukuthi isetshenziswa ngokuhambisana nenye indlela, njengesigxivizo somunwe noma i-PIN. Ngendlela yokuthi ngisho noma othile ethola ukhiye wethu wokuqinisekisa ubunikazi, ngeke akwazi ukwethula iseshini yomsebenzisi ngaphandle kwe-PIN noma izigxivizo zeminwe ezimisiwe.
Futhi, singabona ku-Windows Hello izinketho zokufinyelela ngokuthi Contraseña ukusebenzisa indlela evamile yokuqinisekisa ngephasiwedi ehlotshaniswa nomsebenzisi. inketho ye Iphasiwedi yesithombe ukufinyelela isistimu yokusebenza ngokuhlonza isithombe esihleliwe. Futhi-ke inketho I-PIN ye-Windows Sawubona ukuze kulungiselelwe iphethini yezinombolo noma yamagama nezinombolo noma iphasiwedi ukuze ulawule ukufinyelela Kuhlelo.
Kuleli cala elishiwo ekugcineni, I-PIN ye-Windows Sawubona, okuyilona elisikhathazayo, inqubo yokusetshenziswa injalo elula futhi esheshayo njengoba kukhonjisiwe ngezansi ezithombeni ezilandelayo:
Nika amandla ukusetshenziswa kwephinikhodi ye-Windows Hello
Shintsha i-PIN yakho ye-Windows Hello
Susa i-PIN ye-Windows Hello
Futhi ekugcineni, kubalulekile ukusho lokho, uma ufuna ukwandisa ulwazi olunikezwa usebenzisa iWindows Hello en IWindows 10 noma iWindows 11 con Ulwazi olusemthethweni lwe-Microsoft Windows, ungachofoza okulandelayo isixhumanisi,nalokhu okunye isixhumanisi.
Ungasikhipha kanjani isitifiketi sedijithali ku Windows 10
Ngamafuphi, futhi njengoba kungabonwa, kunikwe amandla noma «susa i-PIN ku-Windows 10» Kuyinto elula ngempela futhi esheshayo ukuyenza. Futhi, masingakhohlwa ukuthi lokhu kusebenza kunikezwa ngethuluzi leWindows elibizwa IWindows Windows. okungesikho thina kuphela ivumela umsebenzisi ukuthi aqale iseshini kunoma iyiphi idivayisi, kodwa futhi ezinhlelweni zokusebenza, izinsiza eziku-inthanethi namanethiwekhi. Konke lokhu, ngokusebenzisa ubuso bethu, iris, izigxivizo zeminwe, kanye ne-PIN.
Futhi nakuba, ngokuqinisekile kwabaningi, ngoba ukuphepha kwekhompyutha, ubumfihlo kanye nezizathu zokungaziwa, lezi izinketho zokungena ze-biometric ngokusebenzisa IWindows Windows ngeke zibe mnandi noma zithembeke. IMicrosoft ithembisa abasebenzisi bayo ukuthi bangaqiniseka ngalolo lwazi olusetshenziselwa ukukhomba ubuso babasebenzisi, irises noma izigxivizo zeminwe abalokothi bashiye idivayisi lapho isetshenziswa khona.
Leyo I-Windows ayigcini le datha ye-biometric, hhayi kudivayisi nanoma yikuphi kwenye indawo. Ngakho-ke, kuzoba yindaba yomsebenzisi ngamunye, ukuthi uyamethemba noma cha Ukusebenzisa kwe-Microsoft idatha yakho yomuntu siqu.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Izinhlelo zokusebenza » Ungasusa kanjani iphinikhodi ku-Windows 10
Ungayishayela kanjani inombolo yocingo eye yangivimba
Ungazi kanjani ukuthi hlobo luni lwe-hard drive enginalo kwi-PC yami